Xasan Sh: Madaxda DF iyo DG daacad kama ahan doorashadda | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa sheegay in madaxda dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada aysan daacad ka ahayn qabashadda doorasho waqtigeeda ku dhacda.
Wuxuu xusay in Axmed Madoobe uu kamid yahay shaqsiyaadkii isbaaradda u dhigtay dowladiisii iyo midan haatan jirta, oo kahor istaagay inay shaqooyinkooda qabsadaan, iyadoo khilaafkii uu abuuray uu sababay in maanta doorashadii shaki laga muujiyo qabsoomidooda.
Madaxda hadda heshiiska ku gaarey magaaladda Muqdisho ayuu tilmaamay in laga rabey howsha ay hadda hayaan inay saddex sano kahor qabtaan, si aan xiligan looga hadlin doorasho ma dhacaysaa mise ma dhici karto.
Farmaajo ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay mudo-xileedkiisa laga maqlay afkiisa erayga doorasho, isagoo sanado badan ku lumiyay safaro aan micna lahayn iyo ka shaqeynta khilaaf siyaasadeed, isagoo sidoo kale kala qeybiyay Maamul Goboleedyada.
0 Comments Topics: xasan sheekh
Walaaca Xasan Sheekh ka qabo doorashadda
Warar 1 October 2020 16:29
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa kamid ah mucaaradka Farmaajo, isagoo ku jira Madasha Xisbiyada Qaran hogaankeeda sare, waxaana la sheegay inuu sanadkan musharax yahay.